पहिले कानून व्यवसायी, अहिले कुराउनी व्यवसायी – NewsAgro.com
पहिले कानून व्यवसायी, अहिले कुराउनी व्यवसायी
यो समाचार 345 पटक पढिएको
बागलुङ , १३ फागुन /कानूनमा बि.एल.सम्मको अध्ययन गरेका त्रिलोचन कँडेलले कुराउनी बेच्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ । बागलुङमा जन्मेका ४७ वर्षीय कँडेलले १५ वर्ष अघि कानूनी सेवा केन्द्र बन्द गरेर कृषि पेशामा प्रवेश गरेका थिए । २०५२ मा बागलुङ बजारमा कानूनी सेवा केन्द्र खोलेर कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचय बनाइसके पनि एकाएक पेशा परिवर्तन गरेका उनले अहिले आफ्नो बेग्लै व्यवसायिक परिचय बनाइसकेका छन् । ‘कानुनी पेशामा अर्कालाई नढाँटेसम्म पैसा नकमाइने देखेँ, मलाई किन किन त्यो पेसामा रुचि बस्दै बसेन, अनि मैले खेती किसानी नै रोजेँ’ कँडेलले भने । घरमा बस्तुभाउ पाल्ने र खेती किसानी गर्ने काममा तल्लिन कँडेलले मुख्य गरी दूधबाट बन्ने कुराउनीलाई व्यापारको मुख्य वस्तु बनाएका छन् । त्यसबाहेक दूध र अन्य दुधजन्य पदार्थ पनि बेच्ने गरेको कँडेलले बताए ।
उनका अनुसार घरमा अहिले तीन वटा दुहुना भैँसी छन् । उनले दूधका लागि पाँच वटासम्म भैँसी पाल्ने गरेको कँडेल अनुभव सुनाए । यामअनुसार दूधजन्य पदार्थको उत्पादनको परिमाण धेरथोर हुने भए पनि मुख्य याममा भने एकै महीनामा रु. ५० देखि ७० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको कँडेलको भनाइ छ । कुराउनीकै आम्दानीले गाउँमै २० लाखको लागतमा एउटा घर र तीन वटा गोठ निर्माण गरिसकेका कँडेलले दुई छोरा, दुई छोरी र श्रीमतीको दैनिक खर्चका साथै घरको सम्पूर्ण घरव्यवहार आफ्नै कमाइबाट चलाएको बताए । यसबाहेक उनले बार्षिक रुपमा केही लाख रुपैयाँ पनि बचत गर्न सकेको बताएका छन् ।
‘सबैभन्दा बढी कुराउनीको माग दसैँ तिहारका बेला हुन्छ, त्यो याममा मागअनुसार कुराउनी पुर्‍याउन पनि धौधौ हुन्छ’ कँडेलले भने ।‘ एकदिन १० देखि १२ किलोसम्म कुराउनी लिएर म बजार पुग्ने गर्छु ।’ घरमै उत्पादन गरेको कुराउनी पोखरा, पर्वतको कुस्मा र म्याग्दीको बेनी बजारमा लगेर बेच्ने गरेको बताउँदै उनले बागलुङ बजारमा आफू दैनिक कुराउनी लिएर आउने बताए । ‘शुद्ध दूधको कुराउनी बनाउने गरेको छु, त्यसैले पनि माग आइरहन्छ, मैले बजार–बजार घुमेर पनि बिक्री गर्ने गरेको छु ,’ उनले भने ।
कुराउनी बाहेक कँडेलले कहिलेकाहीँ दूध, दही र घ्यूसमेत बेच्ने गरेका छन् । उनले कुराउनीको प्रतिकेजी रु. एक हजार २ सयमा बेच्ने गरेका छन् । त्यस्तै दूधको रु. ५०, दही ५० र घ्यू प्रतिमाना ५ सयमा बेच्ने गरेको बताए ।
← पशुपालनमा एक अर्बको लगानी
विदेशी युवाको गाउँमोह →
रक्सी बनाउन छाडेर पशुपालन र तरकारी खेती
June 7, 2014 newsagro 0
गाई पालेरै मासिक ८२ हजार बढी आम्दानी
January 18, 2014 newsagro 1